Sida loo Beddelaan FLAC in regelingen on Mac OS X (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Sida loo Beddelaan FLAC in regelingen on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
Ma jiraa barnaamij kasta oo ii si loogu badalo files FLAC in files regelingen, sidaas oo kale ayaan iyaga gubi karaa in CD oo aan laga badinin tayo leh? Waan ogahay FLAC waa sameecadda ah, waxaana doonayaa inaan sii saamayn asalka audio. Waa maxay barnaamijyada u caawin karaa?
Waxaan leeyahay file a in FLAC in waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhoofsadaan galay Lugood. Waxaan u isticmaali Mac OS. Sidee baan u badalo karaa qaab sameecadda ah in Lugood taageero (regelingen)? Ma jiraa app kasta oo taas loo sameeyo?
Waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si loogu badalo FLAC in regelingen on Mac, sidoo kale wax CD ama loo dhoofiyo si Lugood. Waa hagaag, ma ahan in ay adag tahay in loogu badalo FLAC in WAC on Mac OS X dhab ahaantii. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida loo hawshan ay u dhammeeyaan ku Mac (El Capitan ka mid ah) gudahood 3 talaabooyin fudud.
Diinta FLAC in regelingen Mac, qalab jirta waa loo baahan yahay oo aad u. Waxaad isticmaali kartaa tan smart Converter Audio u Mac talinayaa in this article. FLAC Tani caaqil in regelingen Converter Mac wax fudud si loogu badalo FLAC in regelingen on Mac dhow tayada asalka audio. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay taageertaa diinta Dufcaddii iyo badasha qeybaha cayiman ee file FLAC in regelingen ah.
Intii aanay, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo rakibi app this. Waxaa jira laba nooc oo barnaamijka. Waxaad kartaa dooro version saxda ah oo kaliya sida ay processor Mac. Ka dib markii in, wax yar ka bilaabi si aad u hesho waxaad u bilowday.
Talaabada 1: Import FLAC files in this Mac FLAC in Converter regelingen
Riix badhanka + in ay doortaan iyo files FLAC load ka darawalnimada disk Mac, ama si toos ah jiidi hal ama dhowr FLAC files galay suuqa kala barnaamijka.
Talaabada 2: Dooro regelingen sida qaab wax soo saarka
Si aad u dooratid qaabka aad jeceshahay in loogu badalo file FLAC si aad u, ee bar wax u file maqal ah in, waxaad riixi kartaa labanlaab kor-arrow hoose ee Murayaad barnaamijkan ee ugu waxyooda guddiga wax soo saarka. Ka dib markii in, aad dhaqaajiso dulqabo mouse in Audio "qaybta ka dibna dooro regelingen sida qaab wax soo saarka.
Fiiro gaar ah: Ma rabtaa inaad jar audio in dhererka aad rabto ama gooyay clips audio rabin? Haddii ay sidaas tahay, waxaad isticmaali kartaa shaqo tafatirka this app ee adigoo riixaya "Edit" button ka sokow video clip kasta.
Tallaabo 3: U beddelaan FLAC in regelingen on Mac OS X
Hit Beddelaan si ay u bilaabaan diinta FLAC in regelingen on X. Mac OS Waa ok. Waxaad ku ordi karo asalka si aynu u samayn wax intiisa kale. Markii diinta la sameeyo, waxaad ogaan doonto app icon ku qabaan la garaacay.
Marka aad file .wav ah, waxa aad bilaabi kartaa in ay dajiyaan galay Lugood ama gubi in CD.
FLAC - (Free sameecadda Code Audio) waa codec furan in losslessly qaniinaa audio digital, taasoo la micno ah size file waa la dhimay aan ka saareen wax ka mid ah xogta audio asalka ah. Files FLAC ma noqon kartaa mid taageero Apple Lugood iyo macruufka qalabka sida iPod iwm
Regelingen - qaab file maqal ah caadiga ah digital loo isticmaalo kaydinta xogta waveform; qaabka caadiga ah loo isticmaalo CD audio iyo sidoo. Waxa ay taageerayaan Lugood.
Sida loo Play regelingen on iPhone
Hel Flip4mac Best Kale ee OS X Mavericks